Yintoni umhlaza webele?
Umdlavuza wesifuba ukhula xa iiseli eziqhelekileyo zokuguquka kwebele zikhulayo kwaye zikhula ngaphandle kokulawula. Iiseli ezingaqhelekanga zahlula ukuba zenze i-tumor kwaye ubunzima beeseli bahlala bexhamla njengengxube ebusini. Iiseli ziyakunqumla kwaye zi sasaze kwezinye iindawo emzimbeni, nge-lymph ukuya kwi-lymph nodes okanye ngemithambo yegazi kwezinye izitho.
Ziqhele kangakanani umdlavuza webele e-SA?
Umhlaza wesifuba ngumdla wesifo oqhelekileyo phakathi kwabasetyhini eMzantsi Afrika. Iziphumo zakutshanje zivela kwi-National Cancer Registry kuboniswe ukuba abafazi abangaphezu kwama-8100 bafumaniswe ngo-2013. Omnye wabasetyhini baseMzantsi Afrika baya kuhlakulela umdlavuza webele ngexesha lokuphila kwabo kunye namanani kulindeleke ukuba akhuphuke kwixesha elizayo. Nangona ezinye iindawo zoluntu zinomngcipheko ophezulu kunabanye, kubalulekile ukuba ukwazi ukuba nayiphi na ibhinqa inokuvelisa umdlavuza webele. Kwakhona kubalulekile ukuqonda ukuba umdlavuza webele uninzi ngokuqhelekileyo kubasetyhini kodwa amadoda angafumana umdlavuza webele.
Ziziphi iimpawu zomhlaza wesifuba?
• Ubisi lwesifuba: lo ngumqondiso oqhelekileyo. Izilwanyana azivumi ukuba zibuhlungu xa zincinci.
• Utshintsho lwesikhumba: oku kubandakanya ukuhlutha, ubomvu okanye isilonda (ukuphuka kwesikhumba)
• Utshintsho lweentsimbi: ingono ingashenxiswa okanye ishintshe isikhokelo, kunokukho ukukhutshwa okungavamile kwimbalo
• Isiqongo kwisigxina: kukho i-lymph nodes ezinokubakho
• Utshintsho lobungakanani besisu kunye nobume
Sivavanya njani umdlavuza webele?
Nasiphi na isigulane esinomdla okhankanywe ngumhlaza sidinga oko sikubiza ngokuba "ukuhlolwa kathathu". Oku kubandakanya uviwo ngugqirha, i-imaging yebele kunye ne-ultrasound kunye ne-needle biopsy ethatha iisampuli ezincinci zezivivinyo.
Yintoni isifo somhlaza wesifuba?
Ugqirha wakho uya kwenza iimvavanyo ukujonga ukuba umkhulu kangakanani umhlaza kwaye nokuba usasazeka kwii-lymph nodes okanye kwenye indawo emzimbeni. Isicwangciso sakho sokonyango siya kuxhomekeka kwisigxina kwinxalenye ethile. Amanqamzana amancinci amancinci amancinci angaphinda aphendule kakuhle kunyango.
Ngaba zonke iintsholongwane zebele ziyafana?
Iindidi ezahlukileyo zomhlaza wesisu zinokuziphatha okuhlukileyo, okubizwa ngokuba yi-bior biology. Yingakho unyango lunokuhluke kakhulu phakathi kwezigulane zomhlaza zesifuba. Umhlaza wesifuba uchaza izifo ezahlukahlukeneyo kwaye yile nto eyenza ukuqonda kunye nonyango lukhuni kwaye lunomdla.
Uphethwe njani ngumhlaza webele?
Kukho iindlela ezahlukeneyo zonyango kunye nesicwangciso sonyango kuxhomekeke kuhlobo kunye ne-biology yomhlaza, isigaba kunye nokukhetha kwezigulane. Ukulawulwa komhlaza wesifuba kunzima kakhulu kwaye kuyaphathwa kakuhle kwaye ngoko ke uphathwa ngokugqithiseleyo kwikomiti enononophelo kunye neengcali ezivela kwintsimi nganye. Baza kuxubusha imeko yakho ukuze bafumane indlela engcono kakhulu yokuya phambili. Ngokuqhelekileyo, ezininzi izigulane ziza kufuna unyango kwi-breast area, ebizwa ngokuba unyango lwengingqi kwaye bafuna unyango lomzimba wonke, obizwa ngokuba "unyango lwenkqubo". Uphando kunye nemithayoyiyo yonyango lwangaphakathi, i-chemotherapy, i-hormone kunye neyeza ekujoliswe kuzo ziyeza unyango. Uninzi lwezigulane ziza kuba nezinye okanye zonke ezi zonyango zilandelayo: • Utyando: Phantse bonke abafazi baya kufuna ukuhlinzwa ukuze basuse umhlaza. Oku kunokuba ngumthamo, ukususwa kwebele, okanye ukunyangwa kwebele, apho utywala olunezilwanyana ezinobomi oluzungezile lususwe kwaye abafazi bayaqhubeka bebele. Abasetyhini abanamazinyo okulondolozwa kwintsholongwane kufuneka ukuba babe nombane emva kokuhlinzwa. Kwiimeko ezininzi, ugqirha uya kusebenza ukuvavanya okanye ukususa i-lymph nodes kwi-armpit.
• Uphulo lwe-radiation: Olu unyango luninzi lisetyenziselwa emva kokuhlinzwa ukutshabalalisa nasiphi na iseli somhlaza esesibhobeni okanye kwindawo ye-armpit.
• I-chemotherapy: Le unyango isebenzisa imishanguzo yokulawula iiseli zomhlaza. Abanye abafazi baya kufuna i-chemotherapy ngaphambi kokuhlinzwa kwaye abanye bangadinga i-chemotherapy emva kokuhlinzwa.
• Ulwaphulo lweHormone kunye nonyango olujoliswe kuyo: Amanye amayeza asebenza kuphela ukuba umhlaza unomsebenzi othile. Ugqirha wakho uya kujonga ukuba ezi zonyango ziyakunceda. Unyango lomhlaza wesisu unokuthatha ixesha elide. Ngokuqhelekileyo unyango olunzulu luqala ukuthatha inyanga eziliqela kunyaka. Utyando lweHormone luvame ukuqala emva koko kwaye lunokufikelela kwiminyaka elishumi. Kufuneka ukwazi ukuba abantu abaninzi abanomdlavuza wesibele benza kakuhle emva kokunyanga. Abantu abafumana unyango oluphezulu oluchanekileyo (unyango kwiqela lezemfundo ezininzi elilandela izikhokelo) kwaye abanikezela kwisigaba esingaphambili (kunye namancinci amancinci) banokukwazi ukwenza kakuhle.
Ndingayilungiselela njani ukutyelela ugqirha?
nyango lomhlaza wesifuba luquka ukhetho oluninzi kwaye unako ukuhlangabezana nenani leengcali ezivela kwiqela lezemfundo ezininzi ngexesha lohambo lwakho lokwelashwa. Kubaluleke kakhulu ukuba unxalenye yezigqibo. Kuhlala kunceda kakhulu ukuzisa ilungu losapho okanye umhlobo osondeleyo. Umele uvumele iqela lakho likwazi indlela ozivakalelwa ngayo ngonyango kwaye kufuneka uqinisekise ukuba uyayiqonda into oyikhethayo. Ngokubanzi, kufuneka ucele oku okulandelayo malunga naluphi na unyango olunikezelwayo:
• Ziziphi iingenelo (upsides) kunyango? Ngaba iya kundenza ndive ngakumbi okanye ndiphile ixesha elide?
• Ziziphi iingozi (ukuhla kwehla) kunyango?
• Ngaba zikhona ezinye iindlela zokwenza unyango?
• Yintoni eya kwenzeka xa ndingenayo unyango?
Yintoni eya kwenzeka emva kokonyango?
Uya kufuna ukuza kuhlolwa rhoqo. Uyakufuna kwakhona iimvavanyo eziqhelekileyo njenge-mammogram. Ugqirha uyakukukhangela ngexesha lokutyelela ngamnye kodwa ufanele ujonge kwakhona utshintsho olutsha olunokuba luphawu lomhlaza obuyela emva. Eminye imizekelo yimiba emitsha kwisiqabana okanye ebantwini, intlungu emathanjeni, esifubeni okanye esiswini, iingxaki zokuphefumula okanye iintloko kunye nokuba unayo impawu emitsha kufuneka uxelele ugqirha wakho.
Yintoni endiyenzayo ukuba ndiyifumene?
Nangona ezininzi izibilini zesifuba azikho umhlaza kufuneka uhlale uhlaziye isalathisi. Ugqirha wakho uya kukuhlola kwaye uya kufuna i-breast ultrasound. Ngokuqhelekileyo i-mammogram iya kwenziwa ngokukodwa xa uneminyaka engama-35 ubudala. Ukuba kukho nayiphi na inkxalabo i-biopsy iya kwenziwa.
Ziziphi izinto ezinobungozi ezandisa amathuba okufumana umdlavuza webele?
Kwi-90% yamatyala, imbangela yowesifazane okhulayo umdlavuza webele uyaziwa. Uninzi lwezinto ezinobungozi azikwazi ukutshintshwa kodwa ezinye ziyakushintshwa. Ezinye zezinto eziziwayo zengozi ziquka:
• Isini: abafazi banamaxesha angama-100 amathuba okuphucula umdlavuza webele kunamadoda.
• Umdala: omdala umfazi, mhlawumbi ufumana umdlavuza webele.
• Uhlanga: Abasetyhini abasetyhini banomngcipheko omkhulu wokuhlaselwa ngumhlaza wesibele Imbali yentsapho: Imbali yomhlaza wesifuba kwisihlobo sokuqala (umzekelo, umama, udade, okanye intombi) ixelwe kuphela ngama-20% amabhinqa anomhlaza wesibeleko. Kuphela malunga ne-5% yabasetyhini abanomzimba ongaqhelekanga (njengenguquko ye-BRCA). Baya kuba nomngcipheko we-40-70% wokuphucula umdlavuza webele. • I-radiotherapy yangaphambili ukuya eludongeni lwesifuba: izigulane ezine-radiation ye-lymphoma zinethuba elongeziweyo lomhlaza webele. • Imbali yomntu wesifo somhlaza wesifuba: ukuba ibhinqa linomhlaza wesifuba esisodwa, usemngciphekweni ophezulu kunokwenziwa kwesinye isifo somhlaza wesifuba.
• Ukuba nomlando wodwa wokuba unesifuba sesifuba kwezinye iingxaki ezingaphezu kweminyaka engama-40.
• Ukwelashwa kweHormone
• Izinto zokuphila ezifana nokudakwa kotywala kunye nokungasebenzi
Yintoni endiyenzayo ukuze ndinciphise ingozi yomhlaza webele?
• Ukuqhuba rhoqo
• Gcina isisindo esifanelekileyo
• Ukunciphisa utywala
• Gweba okanye unciphise ubude be-hormone-substitution-treatment
• Ukucwangcisa ukuba nomntwana ngaphambi kweminyaka engama-30 kunye nokuncelisa ubuncinane ubuncinane kweenyanga ezintandathu kunokunciphisa umngcipheko. Ukuxilongwa kwangaphambili kunye nokuhlola Izigulane ezininzi ziza neekransti eziphambili kwiyunithi yethu. Kukho zonke iithintelo ezenza uhambo lwazo lunzima. Ezinye zibangelwa yinkqubo yokunakekelwa kwezempilo kunye nezinye ngeengxaki zentlalo, ukungakwazi ukuqonda kwesi sifo kunye neendleko zokuthuthwa kwee-pocket. Unyango lomhlaza wesifuba uphumelele kakhulu xa unyango lwabasetyhini abasethuba kusasa kunye neentsholongwane ezincinci. Ukuxilongwa kwangaphambili kunokufezekiswa ngokwandisa ulwazi loluntu kunye nababoneleli bezempilo ukuze abafazi baqaphele iimpawu zomhlaza wokuqala kunye nabaqeqeshi bempilo nabo baqaphela i-cancer kwaye babhekisela unyango ekuseni. Sibaxhasayo kwiNkqubo yeBreast 4 abahlengikazi abaqeqeshelwa ngabahlengikazi ekunakekelwa kwebele. Sithemba ukuba le nyathelo iya kunika ulwazi kwaye yenza abantu baseMzantsi Afrika baqonde ngakumbi ngomhlaza webele. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokukhusela umdlavuza webele. Injongo yokwenza uvavanyo kukufumana umdlavuza webele ngaphambi kokuba umfazi uqaphele ingxaki. Amazwe amaninzi afumana imali amaninzi anika iinkqubo zokuhlola iindawo ezisetyenziswa ngabantu abasebenzisa imimmograms ukujonga iintsholongwane zakudala. Asinayo iiprogram zokujonga iinkqubo ezisekelwe kubantu eMzantsi Afrika. Izicwangciso zisendleleni yokwandisa ulwazi kunye nokusetyenziswa kweemviwo zesikliniki njengendlela yokuqala yokuhlola. Uviwo lwebele lwengqondo: Olu luhlolo lwentsimbi olwenziwa ngumqeshwa ononophelo oqeqeshiwe kwaye lunceda ukufumana ukuxilongwa kwangaphambili kunye nokonyango. Bonke abasetyhini abangaphezu kweminyaka engama-40 kufuneka babe nokuhlolwa kwebele kliniki ubuncinane kanye ngonyaka. Oku kunokwenziwa ngabahlengikazi abaqeqeshiwe kwiiklinikhi kunye noogqirha. Buza iklinikhi yakho ukuba ihlolwe amabele xa u tyelela. Ukuzihlolisisa isisu: Bonke abafazi kufuneka baqonde amabele abo kwaye bafanele bahlole amabele abo rhoqo ngenyanga. Ubushushu buguquka kumjikelezo wokuya esikhathini, ngokukhulelwa kunye neminyaka yobudala. Ixesha elifanelekileyo lokuhlola amabele akho emva kwexesha okanye nayiphi na inyanga kwinyanga ukuba awusekho ixesha. I-Technique ibalulekile:
I. Qala ngokuma phambi kwesibuko. Ngaba kukho utshintsho olutsha? Beka zombini izandla zakho kwicala lakho kwaye ukhangele isikhumba sakho kunye neengono, isifuba nesifuba.
II. Phakamisa izandla zakho ngaphezu kwentloko yakho ukuba ukhangele inxalenye engezantsi yamabele. Ukuba amabele akho mkhulu ungadinga ukuphakamisa ukuze ukwazi ukubona ulusu phantsi kwebele.
III. Ngoku ulala phantsi uphakamise ingalo yakho ngaphezulu kwentloko. Oku kuya kuthoba ibele kwaye kwenza kube lula ukuzivakala. Ngomnye isandla siqala ukuva isifuba kwindawo ekufutshane ne-armpit. Unako ukuhamba malunga nebele xa ubhaqa yonke indawo. Emva koko ke uzive phantsi kwe-armpit. Uya kufuneka uhlawule ingalo ukuze ukwazi ukukhulula indawo kwaye uzive ngeempawu. Utshintsha izandla kwaye wenze okufanayo ngaphesheya. Soloko usebenzisa iiplati ezintathu zentsimbi ephakathi ukuze uzive. Musa ukuyifaka isifuba phakathi kweminwe njengoko onke amabele aya kuziva enjalo. IV. Ukuba ufumene utshintsho olutsha luya rhoqo kwaye lukhange lukhishwe.
Name: Philasande Faith Magongoma
Job Description :Market Researcher .
Thozama Siyotula Paediatric surgery at Redcross children's hospital (UCT)